Fivorian'ny Antenimierampirenena :: Hampiasana teknôlôjia ny tsangantanan’ireo depiote • AoRaha
Fivorian’ny Antenimierampirenena Hampiasana teknôlôjia ny tsangantanan’ireo depiote
Raha efa nihelohelo ary naha- zoana fanamafisana, omaly, ny fampiasana teknôlôjia vaovaon’ny fifandraisana, izany hoe tsy hifanatreham-batana, amin’ny fivoriana ara-potoanan’ny Antenimieram- pirenena, dia hatao amin’ny alalan’ io fomba maoderina io ihany koa ny fandaniana an’ireo volavolan-dalàna ao amin’ity andrimpanjakana ity. Ny fifandraisana ampitain-davitra na « visioconférence » avokoa no handraisan’ireo solombavambahoaka rehetra anjara amin’ io fihaonana haharitra telo volana fara fahaelany io, na ny fandinihana tolo-dalàna na ny fandaniana volavolandalàna. Ho fisorohana ny fifindran’ny valanaretina Covid-19 no hiavahan’ny fivoriana arapotoanan’ny Antenimierampirenena, amin’ity indray mitoraka ity.
Samy hiditra mivantana amin’ny alalan’ny fahitalavitra any amin’ny distrika misy azy ny solombavambahoaka tsirairay. “Vonona izahay hanatontosa ny fivoriana amin’ny alalan’ny fampiasana ny teknôlôjiam-pifandraisana. Efa misy tambajotram-pifandraisana rahateo manerana ny distrika rehetra ka tsy tokony hisy ny olana. Ho fitandrovana ny fiparitahan’ny aretina Covid-19 dia hijanonana any amin’ny distrika nahavoafidy azy avokoa ny depiote rehetra hiatrika fivoriana ara-potoana voalohany amin’ity taona ity, raha afaka andro vitsy. Tsy hisy mihitsy ny fivoriana ao anaty trano iraisan’ny depiote rehetra amin’ity. Tanjona ny mba tsy hisian’ny fivoriana fotsy na poakaty”, hoy Razanamahasoa Christine, filohan’ny Antenimieram-pirenena.
Tsy hiova kosa ny fomba fivorian’ny Antenimieran-doholona. “Araka ny toromarika hatreto dia hotontosaina ao amin’ny lapan’Anosikely ny fivorianay loholona. Manomboka amin’ny alakamisy amin’ ny 3 ora hariva ny fanokafana. Ao anatin’ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana izany na ho anay loholona na ho an’ny mpiasa rehetra. Miisa valo ambin’ny folo tsinona ny loholona ka tsy ho sarotra loatra ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana”, hoy Imbiky Herilaza, filoha lefitry ny Antenimieran-doholona.
Fitaterana mihantona an-tariby :: Hanomboka amin’ny jona ny asa fametrahana ny teleferika